top Cat | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! top Cat | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
top Cat waa mid ka mid ah cartoon ugu fiican Kaapelitalo naadi midhaha ka TV show caanka ah ee 80 ee magac la mid ah. In kulankaan, aad u hesho in ay shan duntu ay ciyaaraan iyo 20 bet-khadadka in loo sameeyo hab-gaynta badan. duntu waxaa la gelinayaa ka badan background image of surin ee New York la mid ah goobta ka show ah. music The jazz ee cartoon theme ka dhigaysa xiiso leh ciyaarta ka badan oo xiiso leh. music waxaa aad u aad u nasto, si aad u dhawrtaan kartaa qabow intii ay ciyaarta socotay. Khamaarka wuxuu ku bilaabmayaa £ 0.20 laakiin waxa kaliya ee aad kicin kara ilaa £ 500 kastaaba.
About sameeysa ee Top Cat
Tani waxay caan cartoon show ku salaysan naadi midhaha kulanka waxaa la soo saaray by Print Blue. Mid ka mid ah horumarinta ee adduunka ugu fiican leh waayo-aragnimo qani ah oo khibrad farsamooyinka kala duwan ee ciyaaraha heerka sare. kulan oo ay taageeraan qalabka sida iPhone, iPad, kombiyuutaro iyo qalabka kala duwan ee smart mobile.
Waxaa jira calaamado midabo ee bisadaha kala duwan asal ahaan ka soo show TV si ay u soo celiyo xusuusta aad. pink iyo orange The bisadaha bixin 300x aad saamiga halka labada kalena uu idin siinayo 200 jeer. top The bixinta calaamad cat waa hogaamiyaha by magaca ciyaarta in aad bixisaa 400 jeer on shan ka mid ah nooc ka mid ah. Tani ayaa u muuqda Mire Waqaf oo ku saabsan duntu ka ah in ka dhigi guusha sahlan. Calaamooyinka qiimaha qadaadiic yar yahay of this naadi midhaha kulanka waxaa kaararka ka Ace ciyaaro in Jack ah. Waxaa jira laba sifooyinka gaarka ah ee ciyaarta daboolay by Calaamooyinka logo Afyare iyo lafta kalluun on saxan cad.
Feature Wild: Astaanta lafta kalluunka waa duurjoogta ah oo ku Baddasha for dhan marka laga reebo calaamad gunno ah. Waxay u muuqataa on dhan oo ka mid ah 5 duntu iyo abuuraa tiro badan oo ah isu-gaynta. Shan ka mid ah wilds xitaa aad bixiso 500 lacagta birta ah shan kulan oo uu saftay calaamad.
Feature kala firdhiso: logo ciyaarta waa kala firdhi of this naadi midhaha ciyaarta. Waxay u muuqataa karaa oo keliya on duntu shan, afar iyo saddex. Marka dhan saddex dal, waxaa u furayaa heerka gunnada, halkaas oo aad ka heli in shan qorshe sayidkiisa qaado a. Mid kasta oo daaha ka gunno oo kala duwan oo ay ku jiraan dhigeeysa free, guul lacag caddaan ah iyo gunooyinka kale.
Qofood Dib-u-wareejin: Waxaa calaamad u kulul eey oo muuqan karaa oo keliya on ambadeen shan. Waxay u muuqataa in ay u daboosho ambadeen oo dhan iyo bixisaa dib-u-wareejin leh astaanta u wareegaayo in harsan wareejin kasta. The dib-u-wareejin istaago marka uu calaamad u baxo ka mid ah ku ambadeen wax ugu horeysay.
Summary: Iyada oo sifooyinka gunno gaar ah oo Ghanna ku wareegsan la abaal weyn, waxaad si fudud ka filan karaa in la sameeyo idiina weyn faa'iidada in this naadi midhaha ciyaarta.